တဈကိုယျရေ အာသာဖွခွေငျး၏ သိကောငျးစရာ ... - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်း၏ သိကောင်းစရာ …
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာသည်နှင့် လိင်မှုကိစ္စဆိုသည်မှာ ရှောင်လွဲရန်ခက်ခဲလွန်းသော အရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည် ။ ယခုခေတ်ကဲ့သို့ အစစ အရာရာပြောင်းလဲလာနေသော ခေတ်ကြီးတွင် လိင်နှင့်ပတ်သတ်သော ရုပ်ရှင်များ ဇာတ်လမ်းများ ၊အရာဝတ္ထုများ ၊ လိင်ဖျော်ဖြေရေး ပစ္စည်းများမှာ လွယ်လင့်တကူရနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်လာနေပါပြီ ။
ယနေ့ပွင့်လင်းလာသည့် ခေတ်ကြီးတွင် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဆိုသည်မှ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်တော့ပေ ။ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းသည် လူ့စိတ်သဘာဝအရ ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိလာပြီး မူမှန်သော အပြုအမူအဖြစ် လက်ခံလာကြပါပြီ ။ အရာတိုင်းတွင် ကောင်းကျိုးရှိသကဲ့သို့ ဆိုးကျိုးသည်လဲ ဒွန်တွဲနေတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာဖြစ်သည့်အလျောက် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းနည်းလမ်းတွင်လည်း လွဲမှားသည့်နည်းလမ်းများကြောင့် ဆိုးကျိုးများ ကြုံတွေ့နိုင်သည် ။
ဒီနေရာမှာ သာမာန်လုပ်နေကျ လက်နဲ့မျိုး မဟုတ်ဘဲ အပြားအချပ်တစ်ခုခု ၊ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေရာတွင် သန့်ရှင်းမှုမရှိသော လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိသော ချွန်သော တုံးသော ပစ္စည်းများ သုံးခြင်း နောက်ပြီး လတ်တလောတွင် တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် sex toys များ ကျားအင်္ဂါ မအင်္ဂါအတုများ အသုံးပြုမှု တွင်ကျယ်လာခြင်းနှင့်အတူ မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးသည် အရေးပါလာသည် ။
1. ကျန်နေ ညပ်နေခြင်း
အများစုသော ပြသနာများတွင် လိင်အင်္ဂါအတွင်း ( မိန်းမကိုယ်အတွင်း စအိုအတွင်း လှုံ့ဆော်မှုအတွက် ထိုးသွင်းရာမှ ကျန်နေခြင်း ဖြုတ်မရခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျားအင်္ဂါတုများ ဗိုင်ဗရေတာများဟုထင်ရသော်လည်း ဆေးရုံများမှ ဒေတာများအရ ဂျိုင်းလိမ်းဆေး roll on များ ၊ စပရေးဘူးများ ၊ ရမုတ်ကွန်ထရိုးများ ပါ ထုတ်ပေးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည် ။ အများအားဖြင့် စအိုအတွင်းတွင် ကျန်နေခဲ့သည့်အတွက် ခွဲထုတ်ပေးရသည့် လူနာများမှာ ပိုများသည်ဟု သိရှိရသည် ။ ထို့အတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် အောက်ခြေအပြားကြီးကြီးပါသော သို့မဟုတ် ကြိုးပါသော အရာများကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည် ။
ဗိုင်ဗရေတာကဲ့သို့ တုန်ခါမှုများသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မကြာခဏသုံးစွဲခြင်းသည် အလွန်တရာ နူးညံ့လှသည့် လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ထုံသွားစေနိုင်သည် ။ အင်ဒီးယားနားတက္ကသိုလ်မှ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဗိုင်ဗရေတာ သုံးစွဲသော အမျိုးသမီး ငါးဦးလျှင် တစ်ဦးသည် ထုံကျဉ်မှုကို ခံစားရသည်ဟု တွေ့ရှိရသည် ။ ထို့အတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက တစ်နေရာတည်းတွင် တစ်သတ်မတ်တည်း အချိန်ကြာကြာ အသုံးမပြုဘဲ နေရာပြောင်းပေးသင့်ပါသည် ။
3. ကျားအင်္ဂါကွင်းစွပ်ခြင်း ညှစ်ထားခြင်း
အမျိုးသားများတွင် လိင်တံကြာရှည်စွာ တောင်မတ်စေရန် အချိန်ကြာကြာ သုတ်ရည်ထိန်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျားအင်္ဂါအရင်းတွင် တင်းနေစေရန် ကွင်းများစွပ်ခြင်း သားရေကွင်း စီးနှောင်ခြင်း ညှစ်ထားခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါသည် ( လိင်အင်္ဂါတောင့်မတ်စေသည့် သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိတ်လိုက်ခြင်း သဘောပင် ဖြစ်သည် ) ။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသော လည်းကြာရှည် စည်းထားခြင်းဖြင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွေးကြောများ နာ့ဗ်ကြောများကို ဒဏ်ရာဖြစ်စေသလို ပုပ်သွားစေခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်သည် ။ သို့အတွက် အသုံးပြုချိန်တွင် အရက် ဘီယာ မူးယစ်သေစာ သောက်စားထားခြင်းမျုိးရှောင်ကြည်ပါ ။
Sex toys များ အတုများ သုံးစွဲပြီးသောအခါ သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည် ။ အထူးသဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘဲ မျှဝေသုံးစွဲသောအခါ လိင်အင်္ဂါမှ အရည်များ ထိတွေ့မိရာမှ လိင်မှတင့် ကူးစက်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် ကာလသားရောဂါ HIV အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုး အစရှိသည်တို့ ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ဘဲ ထားပါက ဘက်တီးရီးယားများ မှိုများပေါက်ဖွားနိုင်ပြီး လိင်အင်္ဂါမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကူးစက်စေပါတယ် ။ သို့အတွက် ပုံမှန်ပ်ရည်ဖြင့် ဆေးကြောပေးချင်း လျှပ်စစ်ပါသော ပစ္စည်းများဖြစ်လျှင် သန့်စင်သော အဝတ်ဖြင့် ဆေးကြောပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ် ။
Sex toys များ ပြုလုပ်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ပလတ်စတစ်များ ရာဘာများ အာသာဖြေရာတွင် သုံးလေ့ရှိသည့် အလွယ်တကူရသော ချောဆီများအဖြစ် ( ဆပ်ပြာရည်များ လက်ဆေးရည်များ )သည် စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် တချို့သော သူများတွင် အရေပြားဓာတ်မတည့်မှုရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ယားယံစေခြင်း အနီကွက်များထစေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါသည် ။ တချို့သော ပစ္စည်းများတွင် phthalates ဓာတ်ပါဝင်နေပြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားစေသည့်ဓာတ်ဖြစ်ပါသည် ။ ထို့အတွက် အလွယ်တကူ မဝယ်ယူပဲ သေချာစစ်ဆေးရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ် ။
တချို့သောအမျိုးသားများသည် အာသာဖြေချိန်တွင် မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကျားလိင်အင်္ဂါပေါ်တွင် ဖိအားပိုမိုများပြားစေကာ အနာတရဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ အခန့်မသင့်လျှင် လိင်တံကျိုးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထို့အတွက် ထိုင်လျက်ဖြစ်စေ ၊ မတ်တပ်ရပ်၍ ဖြစ်စေပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် အကြိမ်အရေအတွက်များများ သို့မဟုတ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း အာသာဖြေခြင်းဟာ လိင်တံရဲ့အရေပြားကို ထိခိုက်ပွန်းပဲ့စေပါတယ် ။